Melbourne Tram na-arụ ọrụ zuru oke na anyanwụ dị nro - RayHaber
HomeỤWAOceania61 AustraliaMelbourne Tram na-arụ ọrụ na ike anyanwụ
30 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 61 Australia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Oceania, tram 0
ike Melbourne na-agba ike anyanwụ
Melbourne, isi obodo steeti Victoria, nke chọrọ ịbawanye ike ọ ga-emegharị emeghari site na 50 pasent, na-eji ike anyanwụ dị na-arụ ọrụ na stem dum.
Melbourne, obodo nke abụọ buru ibu na Ọstrelia, malitere ike anyanwụ.
Neoen Numurkah Solar Power Plant, meghere nke ọma na izu gara aga, na-eweta pasent ike mmeghari 100 iji rụọ ọrụ nnukwu netwọm tram nke obodo. A rụrụ ụlọ ọrụ a iji nye ọkụ eletrik 255 puku megawatt awa nke ọkụ eletrik na mba ahụ kwa afọ. A haziri ego a n'okpuru Laborlọ Ọrụ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Ọchịchị na Australia's Solar Trolley Initiative.
390 kwekọrọ na ịkụ puku puku osisi
Site n'ọrụ a, ndị bi na Melbourne ga-enwe ma trams dị ọcha na akọnuche dị mma karị. Mgbapu ikuku nke ikuku ikike ohuru a ga-ebelata nwere ike ịwepu 750 puku ugbo ala n'okporo ụzọ ma ọ bụ na-akụ osisi gburugburu 390 puku. Victoria, isi obodo Melbourne, esetịpụla ihe mgbaru ọsọ ike ya dị ka 2025 ruo 40 na 2030 ruo 50. A na-ahụta oru ngo ike anyanwụ a dị ka ihe dị mkpa na nke a. (na Dünyahal)
Anyanwụ na-akwado bọs sitere na IETT 20 / 08 / 2015 ụgbọ ala kwadoro site na ike anyanwụ İETT: Istanbul Eletrik Tramway na Ọwara Enterprises (IETT) Turkey mbụ anyanwụ-kwadoro mepere emepe ọha iga ụgbọ ala mepụtara, o mere na nke mbụ. Turkey mbụ anyanwụ-jikwa ọha ụgbọ ala na Istanbul Eletrik Tramway na Ọwara Enterprises (IETT) e enịm ke oge mepụtara. Ihe oru mbu nke oru oru ugbua iji zoputa ike na mmanu mere n'etiti Topkapı Eminönü. Ụgbọ ala ahụ na-adọta mmasị na ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma nwee ngụkọta nke panel solar 15. Ụgbọ ala anaghị eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ n'ihi na ọ naghị ahapụ carbon dioxide n'ihi na ọ na-emepụta ume ike mgbe ị na-echekwa batrị. Nchekwa gburugburu ebe obibi ...
Niile ụgbọ oloko na Holland na-arụ ọrụ na ike ikuku 12 / 01 / 2017 Ụgbọ okporo ígwè niile na Netherlands na-agba ọsọ na ike ikuku: ụgbọ oloko eletrik na-enye mpempe njem ụgbọ ala na-aga n'ihu na ya ma e jiri ya tụnyere ụgbọala n'ihi na ha na-erughị ala. 1 January Dị ka nke 2017, ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè Dutch na NS kwuru na ọrụ 10 dị afọ, nke Eneco, ụlọ ọrụ ọkụ eletrik rụrụ, iji mezuo ụgbọ oloko niile na mba ahụ. Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Dutch, bụ nke chọrọ iji belata nkwụsị nke ụgbọ okporo ígwè mere, soro Eneco na 2015 rụkọọ ọrụ. Dị ka atụmatụ ndị ahụ si kwuo, a na-eme atụmatụ 100 pasent ike iji mee ihe iji rụọ ọrụ na 2018, ma mgbe 2016 pasent na 75, atụmatụ atụmatụ
Ịgba ụgbọ okporo ígwè ahụ na-atụ egwu ya 22 / 09 / 2015 Ụgbọ okporo ígwè a na-atụgharị anya na-eju anya: Teknụzụ nke gburugburu ebe obibi iji gbochie mberede ihu igwe na-agbanwe n'ihi nsụcha ọkụ ụwa na-eme ka njedebe nke ihe ọhụrụ. Netherlands na-ewu ụgbọ oloko ndị na-ebugharị ifufe, ebe a na-etinye oghere igwe na ụzọ maka ọkụ eletrik na South Korea na UK. Teknụzụ green na-emepe iji kpochapụ gasị griinụ nke na-eyi ụwa egwu iji belata ihe ize ndụ nke okpomọkụ dị n'ụwa. Mba ndị mepụtara emepe na ụdị ụwa ejirila ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọdụ ụgbọelu nke kachasi ike ha na anyanwụ, okporo ụzọ na-eji nkà na ụzụ, ebe nchekwa data na sava. Teknụzụ kachasị mma gburugburu ebe obibi n'ụwa ...
Ọrụ Konak Tramway ga-agbagha kpamkpam njikọ ya na oké osimiri 07 / 01 / 2014 Project Konak Trab will break the connection completely with the sea: Ụlọ Ahịa nke ndị Architects Izmir Alakụba President Hasan Topal kwuru na obodo ka na-apụ na oké osimiri na 6 lane boulevard ma ha achọpụtaghị na ọ dị mma ịtinye tram line. Obodo Izmir nke ndị na-ede akwụkwọ na-emeghachi omume na mpaghara Fahrettin Altay-Konak-Halkapınar tram line, nke kwadebere site İzmir Metropolitan Municipality ma kwuputa na 26 ga-ere ahịa na February. Onye isi oche nke ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ụkpụrụ ụlọ bụ Izmir Branch Hasan kwuru na obodo ahụ ka na-apụ na oké osimiri na 6 lane boulevard nakwa na ha adịghị achọta ya iji gbakwunye ụda tram
Ngwongwo igwe na-amụba, Izmir meriri 06 / 11 / 2017 Mgbe Nchịkọta Menderes na ụlọ ọrụ ESHOT, İzmir Metropolitan Municipality agbanweela ụlọ elu nke ụlọ egwuregwu na ebe ndị na-adọba ụgbọala n'ime ogige ahụ iji nweta ike iji nweta ọkụ eletrik Ekrem Akurgal Yaşam Park. Site na oghere ndị a na-arụ ọrụ, a na-enye 45 puku elekere elekere elekere elekere elekere elekere n'ime ọnwa atọ na 19 ka egbochi carbon dioxide emission. İzmir Obodo ukwu, nke na-ejikọta ihe dị mkpa iji nweta ume iji nweta ike obodo ndị dị mma göster, na-egosiputa ihe atụ kachasị atụ nke ịmara gburugburu ebe obibi na usoro ike ya. Ebe ndị mmadụ na-agwọ ọrịa mmiri nke ndị mmadụ na-emepụta, ọkụ dị na Ekrem Akurgal Life Park na ụlọ ọrụ ESHOT M
Ndị ọrụ okporo ụzọ na-eti na Melbourne 10 / 08 / 2015 Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Melbourne na-eti: Ndị ọrụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè na Melbourne ekpebiela ịlụ ụbọchị abụọ. Ndị ọkachamara kwuru na ụbọchị abụọ n'ịgba ụgbọ okporo ígwè, bụ nke na-arụ ọrụ dị mkpa n'obodo ndị njem, nwere ike ime ka okporo ụzọ obodo dị. Ụgbọ njem Trolley na Bus Union, mkpebi mkpegbu otu ndị ọrụ RTBU ga-emebi Metro ụgbọ oloko. N'ihi iku ahụ, a gaghị eme ka akara tiketi maka awa 48, a ga-ahapụ ọnụ ụzọ tiketi. Tụkwasị na nke ahụ, ụgbọ oloko ga-enwe ike ịwụsị ọdụ ụgbọelu ndị kwesịrị ịkwụsị. Ndị RTBU, ndị na - anọchite anya ndị ọrụ, anọwo na - emegide ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè n'oge ndị ọrụ ọrụ. Secretary Secretary Luba ...
Ihe omume usoro okporo ígwè: Nzukọ Nchedo okporo ụzọ 2013 - Melbourne 18 / 01 / 2013 Ụlọ Nche Nchebe Rail Conference 2013 - Nzukọ Nche Nche okporo ígwè ga-enwe na 05-07 March 2013 na Melbourne, Australia. Nnọkọ Nchebe Ụgbọ okporo ígwè 2013 bụ ihe dị mkpa nke ga-eme ka ndị na-eme mkpebi mkpebi mba dị iche iche mepụta ụzọ ọhụrụ na ọganihu iji nweta echiche ọhụrụ na izute nchedo nchedo ndị ahịa. Maka nkọwa zuru ezu banyere ogbako, biko pịa: Raillynews
Oge okpomọkụ nke ESHOTta malitere 18 / 09 / 2016 Oge okpomọkụ nke ESHOTta malitere: Izmir Metropolitan Municipality General Directorate nke ESHOT na-emepụta ike ọkụ dị iche iche iji nweta ike ọ ga-eji mee ihe n'ọmụmụ ihe ma kwụsị. Nkwụsị ụgbọ ala ahụ na-acha ọkụ na-akwụsị ga-akpọrọ gị gaa n'obodo ukwu ruo oge dị mkpirikpi. ewusi njem nsoro na environmentally friendly na echekwa ụgbọ ala na-akwadebekwa ka Turkey mbụ electric ụgbọ ala nsoro ESHOT Izmir Metropolitan Municipality Directorate-General, na-launching a ogbara ohuru mgbanwe. ESHOT, nke na-achọ iji zọpụta carbon dioxide na ume ọhụrụ site na iji ike anyanwụ eme ihe n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla ọ na-arụ ọrụ, wee pụta n'ebe obi ebere maka anyanwụ Solar Power Plant Faaliyet. Ya mere, ESHOT ES
Ha malitere ọrụ maka mmepụta nke ụlọ elu Speed ​​Speed 03 / 09 / 2012 Tupu nrọ nke ụgbọ ala ụlọ ọrụ MNNUMX Minista Tayyip Erdoğan, ọ malitere ọrụ maka mmepụta nke ụlọ elu High Speed ​​Train (YHT). Onye isi ọrụ TCDD bụ Süleyman Karaman, 100 kwa afọ 2023 kwa afọ na usoro nke akụkụ nile nke ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ mara ọkwa na ha chọrọ imepụta. Turkish State Railways (TCDD), Prime Minister Tayyip Erdogan tupu 10 percent nke anụ ụlọ ụgbọala dream, a kpere anụ ụlọ High Speed ​​Train (YHT) na-etinye plaster na-emepụta. Onye isi ọrụ TCDD bụ Süleyman Karaman, 100 kwa afọ 2023 kwa afọ na usoro nke akụkụ nile nke ụgbọ okporo ígwè ụlọ ọrụ mara ọkwa na ha chọrọ imepụta. 10 bụ Yüksek mbụ ụwa
Anyanwụ Tram nyere ya
Netiwọki trakt na Melbourne
Ike imeghari ume
Ationgbọ njem nke Kayseri Zọpụtara 1 Nde 121 puku 920 Lira na Mmepụta Ulo
Anyanwụ na-akwado bọs sitere na IETT
Niile ụgbọ oloko na Holland na-arụ ọrụ na ike ikuku
Ịgba ụgbọ okporo ígwè ahụ na-atụ egwu ya
Ọrụ Konak Tramway ga-agbagha kpamkpam njikọ ya na oké osimiri
Ngwongwo igwe na-amụba, Izmir meriri
Ndị ọrụ okporo ụzọ na-eti na Melbourne
Ha malitere ọrụ maka mmepụta nke ụlọ elu Speed ​​Speed